Kedu ihe bụ Usoro Nkwukọrịta Gị? | Martech Zone
Monday, October 20, 2008 Sunday, November 25, 2012 Douglas Karr
A hilarious vidiyo na atumatu ahia di n'ime. Mụ na ndị mmadụ na-egwuri egwu mgbe niile na onye na-arụzi ụgbọala ya na-arụzi ụgbọ ala ya last
Tags: usoro nkwukọrịtankwukọrịta dị n'imeatụmatụ nkwukọrịta dị n'ime
Ọkt 21, 2008 na 12:08 PM
Ezi ndụmọdụ. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ile anya n'ime ọtụtụ oge iji chọpụta ma ọ bụrụ na a ga-eme ka atụmatụ ha pụta n'ihu ọha. Ọtụtụ oge ndị ahịa na-ejide onwe ha nke ukwuu na usoro ha na-echefu iche echiche ihe niile.
Nov 10, 2008 na 3:28 PM
Hụrụ vidiyo ahụ n'anya! Otu n'ime nnukwu mbupute / azụmaahịa m hụrụ na ọrụ m bụ ebe a na-ewepụta ndị guzobere ihe niile gbasara atụmatụ ọhụrụ ahụ, mana ha egbughị ya ndị ọrụ. Kasị njọ, ebe ọ bụ na ndị guzobere anaghị ere ahịa ahụ n'ezie, ha enweghị echiche otu ndị ahịa si ele ọrụ ahụ na akara ahụ anya.
Na ngwụcha ụbọchị, ndị otu ahịa jụrụ (ee - A J RR R) iji ihe eji ere ahịa ọfụma na okwu ọhụrụ. Ndị guzobere ga-alaghachi na mbadamba ihe osise mgbe ha tụfusịrị ego ahụ niile.
Yabụ # 1 gụnyere ndị ọrụ gị na ịhazi atụmatụ azụmaahịa, n'ihi na ha nọ n'usoro ihu na # 2 ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ire ndị ọrụ ahụ usoro ọhụụ ahụ, ị ​​gaghị enwe ike ire ya ndị ahịa.
(A bit nke re-post, hapụrụ okwu a na saịtị ahụ kwuru na vidiyo)